त्यहाँ उच्च रक्तचाप र हृदयघात को उपचार को लागि धेरै उपकरण हो। तिनीहरूलाई बीच, यो अन्तिम स्थानमा "Diroton" कब्जा छ छैन। अतिथि विशेषज्ञहरूले पूर्ण छ भनेर पनि मान्छे पुरानो उच्च रक्तचाप भोगिरहेका मा रक्तचाप lowers सुझाव। साथै, दबाइ बिगडा हृदय समारोह सम्बन्धित अवस्था को उपचार मा निर्धारित छ। यो monotherapy र संयोजन चिकित्सा को भाग रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उच्च दक्षता भए तापनि सबै व्यवसायीक राम्रो "Diroton" अर्थ हो। केही डाक्टर को समीक्षा ठूलो औषधि प्रयोग provokes जो, प्रतिकूल प्रतिक्रिया संख्या जोड। यी साइड इफेक्ट के के हुन्? ट्याब्लेटको "Diroton" हुन सक्छ:
चक्कर आना, टाउको दुखाइ
· Diarrheal विकार: पखाला, वाकवाकी, उल्टी
· सुख्खा बारम्बार खोकी
· को sternum मा दुखाइ, tachycardia
· भौतिक कमजोरी, अत्यधिक दबाव ड्रप
एलर्जी प्रतिक्रिया rashes, सुनिंनु, खुजली,
· हेमोग्लोबिन Lowering, वृद्धि erythrocyte अवसादन दर
· Arthralgia, hyperkalemia
· गुर्दे समारोह वा कलेजो को सजिलै देखिने गिरावट
यो दबाइ ध्यान निर्धारित छ यी कारणहरूले गर्दा हो। यद्यपि, अन्य विशेषज्ञहरूबाट "Diroton" समीक्षा पहिलो काट्न, धेरै विरामीहरु गर्न राहत ल्याउन सक्ने एउटा शक्तिशाली लागूपदार्थ छ। अपेक्षित लाभ निकै को काल्पनिक हानि नाघ्यो मात्र तर, सबै भन्दा उपकरण जस्तै, यो निर्धारित छ।
बिरामीको Diroton "दबाइ कसरी समावेश गर्ने? मान्छे को समीक्षा दबाइहरु आफ्नो मूल्यांकन भिन्न लिन। केही आफ्नो हालत मा तीव्र सुधार भन्न। अरूलाई, दबाइ पक्कै प्रभावकारी छ कि सहमत गर्दा, रिकभरी एकदम लामो समय प्रतीक्षा थियो र खुराक एकदम उच्च थिए रिपोर्ट। अरूलाई दबाइ "Diroton" मदत गरेन भनेर गुनासो।
यस मा अनौठो केही छ। आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, यसको आफ्नै susceptibility वा प्रतिरक्षा संग एक अद्वितीय सिर्जना - प्रत्येक व्यक्ति को शरीर किनभने। उच्च रक्तचाप भोगिरहेका केही विरामीहरु, सबै दबाइ contraindicated छ।
"Diroton" छन् नै, मा contraindicated छ यो कुरा सबै विशेषज्ञहरु समीक्षा:
· Hyperaldosteronism मा, अर्थात् को adrenal Cortex द्वारा हर्मोन aldosterone को बढ्तै उच्च उत्पादन संग सम्बन्धित रोगहरु
· गर्भवती महिला, सुत्केरी
· एक मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि
· गुर्दे गतिविधि कुनै पनि उल्लंघन: धमनी stenosis, प्रगतिशील azotemia
· इतिहास दर्ता गरिएको छ भने मौका angioedema
सबै अवस्थित विशेषज्ञहरु "Diroton" निम्न अवस्थामा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सहमत:
· उल्टी, डराएको, पखाला
यदि चाहेको उद्देश्य "Diroton" diuretics संग उपचार द्वारा preceded थियो दबाव मा एक तेज ड्रप पैदा गर्न सक्छ
· ती जसको व्यवसायहरुको आवश्यक वृद्धि ध्यान, समन्वय, एकाग्रता
· यदि मृगौला समारोह
हंगेरी "Diroton" केही डाक्टर यस दबाइ रुचि जो analogues, छ।
यो क्रोएशिया देखि साइप्रस मा उत्पादन जो "Dapril", "Irumed", भारतीय "Lizakard" जर्मन दबाइ "Lizigamma" "रूस मा उत्पादन Lisinopril"।
तयारी मूल्यहरु र excipients को संरचना फरक हुन्छन्।
यो गरेर यी लागूऔषधको कुनै पनि निकाय घातक क्षति हुन सक्छ कडाई कि, सम्झना गर्नुपर्छ आफ्नै तपाईंको चिकित्सकको उपचार सिफारिसहरू बिना।
को उपचार डाक्टर मात्र रोगी को परीक्षा पछि यी यौगिकों कुनै पनि साथ उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् पर्छ। साथै, यो आफ्नो औषधिको खुराक र भर्ना नियम पालन, दबाइ प्रयोग गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यसरी "Diroton" अवस्था र 10 40 को निदान (अधिकतम औषधिको खुराक) प्रति दिन मिलीग्राम निर्भर लिन सल्लाह। रोगी diuretics लिइरहेको छ कि घटना मा, "Diroton" रद्द वा यसको प्रयोग प्रति दिन5मिलीग्राम कम छ।
औषधि "Viferon"। निर्देशन
Fluoroquinolones: लागूपदार्थ, सङ्केत गर्छ, contraindications र साइड इफेक्ट
कसरी "Linex" पिउन: निर्देश पुस्तिका, समीक्षा, तयारीको को वर्णन, रिलिज फारम
मास्को मा ऐतिहासिक संग्रहालय - भ्रमण गर्न के? मास्को मा ऐतिहासिक संग्रहालय को समीक्षा
सूजी केक - को नुस्खा। एक स्याउ पाइ-manno कसरी खाना पकाउनु
Nexia3- कोरियन बजेट कार
Bunin, "द गाउँ": सारांश, विश्लेषण र समीक्षा